जुलाई २०२० मा उत्तर अमेरिकी बजारमा लोकप्रिय सामग्रीहरू - Medicinerawmaterials.com
जुलाई २०२० मा उत्तर अमेरिकी बजारमा लोकप्रिय सामग्रीहरू
उत्तर अमेरिकी बजारमा हाल कुन उत्पादनहरू धेरै लोकप्रिय छन्? उत्तर अमेरिकी सामग्रीहरू प्रत्यक्ष बिक्री नेटवर्कले हालका महिनाहरूमा प्लेटफर्म प्रयोगकर्ताहरूको उच्च खोजी फ्रिक्वेन्सीको शब्दावली सारांश गर्न ठूलो डाटा प्लेटफर्मको फाइदा उठाएको छ (प्लेटफर्म अनलाइन उत्पादनहरू बाहेक), जहाँबाट हामी भर्खरको बजार मागलाई देख्न सक्छौं, त्यसरी ब्यापार अवसरहरू कब्जा गरेको र उत्पाद विकास को लागी अधिक ठाँउ जित्ने। खोजिएको तातो उत्पादनहरू मध्ये,--HTP, बाँस र बीटा Alanine शीर्ष तीन स्थानमा छ। यदि तपाईंसँग निम्न लोकप्रिय उत्पादनहरू छन् भने, कृपया Medicrawmatorys.com लाई सम्पर्क गर्नुहोस् र उनीहरूको प्लेटफर्ममा उनीहरूको मूल्य खेल्न दिनुहोस्!
अझै कुनै आपूर्ति छैन, र हामीले जुलाईको अन्त्यसम्म वा अगस्टको सुरूसम्म कुर्नु पर्ने हुन सक्छ। नयाँ स्टकको लागि मूल्य १$०- $ १ /० / किलोग्राम हुन सक्छ। चिन्ता कम गर्नका लागि एक लोकप्रिय सामग्रीको रूपमा, यो आशा गरिन्छ कि माग बर्षको बाँकी रहन दिनेछ
कडा आपूर्तिको कारण मूल्य थोरै बढ्नेछ।
अधिकतर भिटामिन सी कारखानाहरू उत्पादन सजिलैसँग चल्दैछन्, र गत दुई महिनामा बढ्नुको सट्टा मूल्य सपाट भएको छ। यद्यपि DC97 ग्रेड अझै अभावमा छ, तर हामी लाग्छ कि सुरूवात सामग्रीको अधिक उपलब्धताको साथ अभाव चाँडै समाप्त हुनेछ। आउँदो हप्ताहरूमा, हामी सोच्छौं एस्कोर्बिक एसिड स्थिर हुनेछ र मूल्य नरम हुनेछ।
पछिल्लो दुई महिनाको कच्चा माल एस्कॉर्बिक एसिडको मूल्य उच्च भएको कारण एस्कोर्बल पाल्मिटेटको मूल्य पनि छिटो र कडा आपूर्तिको साथ बढेको छ। यद्यपि यो गर्मीमा एस्कॉर्बिक एसिडको मूल्य नरम हुँदै जाँदा कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो उत्पादन भारत मा दुबै उच्च माग मा छ र अमेरिकी मूल्य स्थिर रहन्छ, जे होस्, सूची कडा छ।
प्रमुख कारखानाहरूले मूल्य र आपूर्ति स्थिर गर्दै छन् र खोल्ने प्रक्रिया राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ। बीटा ग्लुकनको भविष्य राम्रो छ यसका स्वास्थ्य लाभहरूको कारणले।
पुन: खोल्ने प्रक्रियाको साथ, आपूर्ति फिर्ता आयो, र कारखानाहरूले उद्धरण गर्न र अर्डर लिन सुरू गर्यो। हामी सुझाव दिन्छ कि कार्यहरू स्ट्याक तयार गर्न ASAP लिनुपर्नेछ किनभने ग्रीष्म achingतु नजिक छ जब मर्मत सम्भारका लागि बन्द हुँदा ठाउँ लिन्छ।
क्याल्शियम Ascorbate / सोडियम Ascorbate
अधिकांश कारखानाहरू कच्चा माल एस्कॉर्बिक एसिड उत्पादनको साथ कब्जामा छन्। सोडियम र क्याल्शियम नुनको उत्पादन अझै माग पूरा गर्न पर्याप्त छैन, र मूल्य उच्च स्तरमा छ। केही नयाँ कारखानाहरूले यी उत्पादन गर्न कोशिस गरिरहेछन्, तर सरकारबाट स्वीकृति स्वीकृतिका कारण यसलाई होल्डमा राखिएको छ। हामी सोच्छौं कि गर्मी को माध्यमबाट मूल्य उच्च स्तरमा स्थिर हुनेछ।
कार्निटाइन श्रृंखला उत्पादनहरू
आपूर्ति अझै थोरै मागको साथ सन्तुलित छ। प्रदूषण नियन्त्रणको कारण प्रमुख उत्पादकहरूको क्षमता बृद्धि गर्ने कुनै इरादा छैन। नयाँ कारखानाहरूको लागि यसलाई कडा हुन कठिन छ। हामी सोच्छौं कि यस वर्षको बाँकी रहनेछ जब सम्म नयाँ कारखानाहरू आउँदैनन्।
मूल्य थोरै बढ्नेछ किनकि मूल्य चक्रीय कम विन्दुमा छ।
साइट्रिक एसिड यूएसपी
महामारी नियन्त्रण, भाडा, ह्यान्डलिंग, आदि सहित बढेको लागतको कारण मूल्य थोरै बढ्नेछ।
मूल्य र आपूर्ति स्थिर रहन्छ र हामी लाग्छौं यो यस बर्षको अन्त्य सम्म रहनेछ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा माग र आपूर्ति सन्तुलित छ, त्यसैले मूल्यमा धेरै परिवर्तन हुँदैन। चीनमा माग बढ्न थालेकोले पूरै खुराक लिन मानिसहरू बढ्दै गरेको चेतनाको कारण थियो।
मूल्य १०-१-10% ले वृद्धि भयो र माग अझै तंग छ।
ग्लुकोसमिन उत्पादनको मूल्य आंशिक रूपमा महामारी र मांगमा कमीको कारण ट्रेंड हुँदैछ। अर्कोतर्फ, केहि हदसम्म, किण्वित ग्लुकोसमिन उत्पादनले ग्यालुकोसमिन उत्पादनको बजारलाई क्र्याब / स्रिम्प शेलबाट प्रभाव पार्दछ।
हरियो कफी बिन
भारतमा लक डाउनका कारण, हाम्रो मुख्य आपूर्तिकर्ता श्री अहिंसा भर्खर उत्पादनमा फर्किए र जुलाईमा नयाँ स्टकको व्यवस्था गर्दैछ। GCE उत्पादनको लागि मूल्य स्थिर रहन्छ।
L-Glutamine बजार हालको अलिकता भ्रमपूर्ण छ। चीनको उद्धरण अमेरिकी बजार मूल्य निर्धारण भन्दा उच्च छ, जसको अर्थ उत्पादन लागत बढी छ, तर अमेरिकामा उपलब्ध शेयर अझै केही समय टिक्न सक्छ।
मूल्य घट्दो छ। चीनमा उत्पादन राम्रो हुँदै गइरहेको छ, र आउने महिनाहरूमा एक अधिक मद्दतको मुद्दा हुन सक्छ।
L-Phenylalanine / L-Theanine
मूल्य र आपूर्ति हाल स्थिर छन्।
सुरूवात सामग्री stably आपूर्ति गरीरहेको छ, तर लागत थोरै बढ्यो, त्यसैले MSM मूल्य पनि थोरै बढ्यो।
माग र मूल्य स्थिर छ।
सुरूवात सामग्री stably आपूर्ति गरीन्छ, तर लागत थोरै बढ्यो, त्यसैले MSM को मूल्य पनि बढ्यो।
मूल्य थोरै घट्नेछ किनकि फेब्रुअरीदेखि मूल्य उच्च भएको छ, तर अब उत्पादन राम्रो हुँदैछ, र उपलब्धता सुधार हुँदैछ।
प्राकृतिक क्याफिन निर्जल
हाम्रो मुख्य भारत आपूर्तिकर्ता अझै तल बन्द छ। यसले हाम्रो प्राकृतिक क्याफिन एन्हाइड्रोसको आपूर्तिलाई असर गरेको छ; अब तंग सूचीको सामना गर्दै।
सुरूवात सामग्री मूल्य वृद्धिका कारण मूल्य थोरै बढ्यो। सेतो बनाउनको लागि सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीहरूमा Niacinamide को प्रयोग ठूलो रूपमा प्रचार गरिएको छ। यसले भविष्यमा यसको उत्पादनको बजार आकार बढाउनेछ।
मूल्य र स्टक स्थिर रहन्छ।
मूल्य र स्टक स्थिर रहन्छ। धेरै कारखानाहरूले नयाँ उत्पादन लाइन खोलेका छन् र बढ्दो मागको पूर्तिका लागि गुणस्तर वृद्धि गरिएको छ।
हुबेइ फेरि खुल्ने क्रममा कारखानाहरूसँगै आपूर्तिमा सुधार रहन्छ। तेलको मूल्य हालै खटेको कारण सुरूवात लागत लागत घट्यो, त्यसैले मूल्य स्थिर तर नरम छ।
भिटामिन ए र डी
बीएएसएफ र डीएसएम दुबैले सुरूवाती सामग्री गुणात्मक मुद्दाको घोषणा गरेका छन्, र जुन र जुलाईमा आपूर्ति बाधित छ। डिमांड थोरै घट्यो, परिणाम स्वरूप, मूल्य थोरै फर्म तर स्थिर हो।
भिटामिन बी १ एचसीएल / भिटामिन बी १ मोनो
मूल्य अलि कम भयो। यो फेब्रुअरीमा उच्च फिर्ता थियो र अब यो एक उचित तहमा फिर्ता मार्गमा छ। उपलब्धता उत्पादन माथि र चालू संग सुधार राख्छ।
भिटामिन B12 (स्यानकोबालामीन र मेथाइलकोबालामीन)
त्यहाँ Ningxia र हुबेई मा दुई नयाँ उत्पादन सुविधाहरु आउँदैछन्। उपलब्धता राम्रो आकार मा रहनेछ र मूल्य स्थिर र एक उचित कम स्तर मा हुनेछ।
भिटामिन ई (सिंथेटिक)
चीनमा उत्पादन राम्रो भइरहेको छ, तर युरोपमा, प्रमुख कारखानाहरूको उत्पादन प्रभावित छ। भिटामिन ए जस्तै, मूल्य स्थिर छ, तर पागल हुने आशा गरिएको छैन।